We Fight We Win. -- " More than Media ": မြန်မာနိုင်ငံ မှာ တရားဝင် ပြည့်တန်ဆာတန်း ရှိသင့်တယ်
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ တရားဝင် ပြည့်တန်ဆာတန်း ရှိသင့်တယ်
သင်္ကြန်ပုံရိပ်တွေ ကြည့်ပြီး . အိမ်ရှင်ဦးလေး နဲ့ ဝေဖန်ဖြစ်ကြတယ် .မြင်ကွင်းတွေ အတော် ဆိုးတယ် လို့ ပြောတော့ . . . သူက တချက် ထောက်ပြတယ် .
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင် ပြည့်တန်ဆာတန်းရှိသင့်တယ်တဲ့. . .
နိုင်ငံတကာ မှာ လိုင်စင် နဲ့ တရားဝင် ခွင့်ပြု ထားတော့. သူ့ သတ်မှတ် ဧရိယာ မှာ စီးပွားရှာ . သတ်မှတ်ဧရိယာ မှာ ကြိုက်သလို မြှူဆွယ် ခွင့် ရှိ သွားတယ် တဲ့ . . . အဲ့ တော့ ဒါကို စိတ်မ၀င်စားတဲ့သူတွေ အတွက်လဲ public ထဲ မှာ အနှောက်အယှက် ဖြစ်မနေတော့ ဘူး .
ဒါကို စိတ်ဝင်စား တဲ့ .. ၀ါသနာ ပါတဲ့ မိန်းခလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် . မလုပ်ပါနဲ့ လို့ တားနေလို့ လဲ မရဘူး .
လူအမျိုးမျိုး . စိတ်ဝင်စားမှု အမျိုးမျိုး . ၀ါသနာအမျိုးမျိုး ရှိတယ်တဲ့ . အတင်းအကြပ်ကြီး ပိတ်ပင်လို့ မရဘူးတဲ့ .
ဒီတော့. ဒါမျိုး ၀ါသနာတဲ့ သူတွေ အတွက် . . ၀ါသနာ မပါတဲ့ သူတွေ အနှောက်အယှက် မဖြစ်အောင် သီးသန့် နေရာ သတ်မှတ်ပေးသင့်တယ် . ဆေးလိပ် သောက်သလို ပေါ့ .
သင်္ကြန်မှာ ကြွတတ်နေ တဲ့ မိန်းခလေးတွေ ၇ဲ့ ဗီဇ . ၀ါသနာ . စရိုက်ကို ချိုးနှိမ် ထားဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး .
ယောက်ျားလေးတွေ လဲ ဒီအတိုင်းပဲ . ဆိုတော့ အဲ့ လို ၀ါသနာ ၇ှိတဲ့ သူတွေ အတွက် . အဲ့ လို သောက်စားပျော်ပါး ဖော်ချွတ် တာကို ခံစားခုံမင် လိုသူတွေ အတွက် အစိုးရ က သီးသန့် နေ၇ာ တရားဝင်ပေးထား ပေးသင့်တယ် . ၀ါသနာပါရင် ၊ ဒါကို ပျော်စရာလို့ ထင်ရင်
သတ်မှတ်နေရာမှာ သွားပျော်ကြ . ၀ါသနာ မပါတဲ့ သူတွေ ဆို မသွားနဲ့ .
နောက် . လိုင်စင်ရ ပြည့်တန်ဆာတန်း ရဲ့ အားသာချက်က ရောဂါ ဘယ ကင်းတယ် . မိန်းခလေးတွေ တန်ရာ တန်ကြေး ရတယ် တဲ့ ။
တချို့ မိန်းခလေးတွေ က ၀ါသနာ အရ ၇ှိသလို တချို့ ကျတော့ စားဝတ်နေရေး ကြောင့်မလုပ် မဖြစ်လို့ ကို လုပ်ရတာမျိုးတွေ ၇ှိနေတော့ 
ပရမ်းပတာ ဈေးကွက် ထဲ မှာ သူတို့ အတွက် တန်ရာ တန်ကျေး ရ ချင်မှ ရ နိုင်လိမ့် မယ် .
သနားစရာကောင်းတယ် . ဘ၀ ကြီး နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီး နဲ့ ရင်းနှီး ထားပြီး မှ . . တန်ရာတန်ကြေး မှ မရဘူးဆိုရင် . .
သူတို့ အတွက် အရမ်း နစ်နာတယ် .
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ တရားဝင် ဖြစ်မနေတော့. နိုက်ကလပ် တွေမှာ . သိမ်ကြီးဈေးမှာ . ပန်းဆိုးတမ်းမှာ . အဝေးပြေးလမ်းမ တွေ ပေါ်မှာ .
ဈေးကွက် ရှာတဲ့ သူတွေ နဲ့ သာမန်မိန်းခလေးတွေ နဲ့ ရောနေရော . သာမာန် မိန်းခလေးတွေ အတွက် အနှောက်အယှက်ဖြစ်သလို .
ပြည့်တန်ဆာမလေး အတွက် လဲ ဈေးကွက် နစ်နာတဲ့ အပြင် . ဒီကိစ္စ ကို ဆန္ဒရှိတဲ့ ယောက်ျားတွေ အတွက်ရော ဆန္ဒ မရှိတဲ့ ယောက်ျားတွေ အတွက်ပါ .အဆင် ပြေ မှု မ၇ှိတော့ ဘူး .
အဲ့ ဒီတော့ တရားဝင် ပြည့် တန်ဆာတန်း ၇ှိသင့်တယ် လို့ ယူဆပါတယ် ။
အဲ့ လို မှ မဟုတ်ရင်တော့သင်္ကြန် ဆိုတာ ကြီး မှာ national heritage တွေ rape လုပ်ခံနေရ အုံးမှာပါပဲ . . .
မြန်မာပြည်စင်တင်တေးဂီတဘီယာဆိုင်တချို့နှင့် ဒစ်စကိုကလပ်အချို့တွင် မော်ဒယ်လျောက်ရင်း ပြည့်တန့်ဆာအခကြေးငွေကို ခေါင်းပုံဖြတ်ခံနေရသည့်မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်များ။
စင်တင်တေးဂီတရှိဘီယာဆိုင်များနှင့် ဒစ်စကိုကလပ်များသို့ အလှည့်ကျဖျော်ဖြေဖောက်သည်ရှာဖို့အတွက် ကိုယ်စားလှယ်များ(ခေါင်း) စီစဉ်ပေးသည့်ကားများဖြင့် သွားလာလှုပ်ရှားနေရသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်တချို့ရဲ့ညဘဝ။
It's all about politics. If there isagood political system, everything's gonna be fine. 90% of the girls won't do what they are doing now if they can make enough money to survive without doing it. Most of them are doing it not because they want easy money but because they are not able to survive without doing it. So we don't need red-light district in our country.
I agree. In Japan, it's legal and the prostitutes have to undergo medical checkup every week. The doctors signed on the prostitute's license after passing medical. They have to show the customers their medical status when they are hired. It's safe for everybody. Prostitution cannot be prevented, so why not make it safe and beneficial for everybody. Prostitutes don't have to worry for police, customers can enjoy without worry and most of all, the government gets tax also. It'sawin win situation for all. So what if it is not legal in the US? Who says US system is perfect?